Nezvedu - Shenzhen Lantaisi Technology Co., Ltd.
Mira Style Series
Mota Mount Series
Chigadzirwa Bvunzo & Kuongorora
Vadiwa Vatengi! Ndinofara kusangana newe pano!
Shenzhen LANTAISI Technology Co, Ltd, yakavambwa muna2016, inoumbwa neboka revarairidzi nekutengesa vane hupfumi ruzivo mune nhare mbozha isina waya. Iwo matekinoroji, ane makore gumi neshanu kusvika makumi maviri ane ruzivo mukugadzirwa kwekugadzirwa, tekinoroji shanduko yechirongwa uye kuziva-mumunda wekuchaja usina waya, anobva kuFoxconn, Huawei nemamwe makambani ane mukurumbira. Isu tinogadzira, tinogadzira, tinopa uye tinotengesa michina isingadhuri-isina waya yekuchaja mafoni, maTWS mahedhifoni uye mawadhi akangwara, uye tinopa mhinduro dzemhando yepamusoro dzisina waya. Isu tave nhengo yeWPC uye nhengo yeApple uye zvigadzirwa zvedu zvese zvinoenderana neQi standard.
Takapfuura CE, ISO9001, ISO14001, FCC, MFI, BSCI zvitupa. Isu tiri zvakare nhengo yeQI uye USB-IF.
Zvese zvigadzirwa zvakagadziriswa mamodheru ane edu maitiro chitarisiko.
"Yakagadzirwa muChina" yanga iri yedu B2B chikuva kubvira 2020. Isu takapasa iyo Fekitori Kuongorora na "Made In China".
Chinangwa chedu ndechekuve Wekutanga-Kirasi "Akangwara Kugadzira" yemagetsi magetsi cheni mune zvigadzirwa zvemagetsi zvemagetsi, isu tinoedza kuongorora tekinoroji yepamusoro kwazvo gore rega. Tinogona kuita OEM uye zvakadzama ODM sevhisi kune edu akakosha vatengi uye isu tine chokwadi chekupa yakanyanya kukosha kune vatinoshanda navo.
Mushure memakore ekukurumidza kukura, bhizinesi redu rakawedzerwa kumisika dzakasiyana dzepasirese, senge mainland China, Japan, South Korea, Middle-East, Southeast Asia, Europe, United States nedzimwe nzvimbo. Tinoshuvira kudyidzana kwakanaka newe vanokudzwa vatengi.
Tekinoroji uye zvigadzirwa
Chigadzirwa chigadzirwa: Pad, mira, mota gomo, 2 muna 1, 3 muna 1, multifunctional rinoumbwa uye munhu PCBA zvinodiwa
Kutengesa michina yekutsigira: SmartphoneS, TWS nhare, smart watches, nezvimwe
Kutengesa mode: Wireless / Inductive / Cordless
● Chiitiko muna 2016
▪ R & D yemajaira efoni e-wireless
● Zviitiko muna 2017
▪ Akave nhengo dzekutanga dzeWPC Qi Association
● Zviitiko muna 2018
▪ Yakaparura mota isina waya marasha mumusika uye ndokumisikidza musangano wegungano rese, uyo unowedzera kugona uye huwandu hweOEM.
● Emavhiri muna 2019
▪ Kurumidza kuchaja isina waya EPP protocol kuiswa mumusika
▪ ISO9001 Chitupa
● Zviitiko mu2020
▪ Iva Nhengo yeApple
▪ Chitupa cheMFI chinowanikwa nekuongororwa muchini yeApple wachi (iwatch) nekambani yeApple
Co-muvambi wekambani Mr.Peng naVa Li nezvimwe, vane makore anopfuura gumi nemashanu vakapfuma ruzivo uye ruzivo mune nhare yemagetsi. Ivo vari kunyatso kuziva kuti isina waya yekuchaja tekinoroji chichava chinhu chakakosha kune hupenyu hwevanhu uye kuvaka zvikwata kuzvigadzira nekuzvigadzira. Mushure memakore anopfuura mashanu ekuvandudza, isu tinova nhengo yeWPC uye nhengo yeApple, isu takakura kusvika kune yakasimba uye kuyera simba fekitori mune isina waya yekuchaja indasitiri.
Nekuenderera mberi kwekugadzirwa kweterevhizheni yekuchaja tekinoroji, zvigadzirwa zvechaja zvisina waya zvinopinda mumhuri dzakawanda uye zviitiko zvekushanda. Tichaedza kupa zvakawanda zvakaisvonaka zvigadzirwa uye mhinduro kune vamwe vedu uye cooperators. Uye kuwedzera kuwedzera kukosha kwako.